हतार गरेर खाना खानुहुन्छ ? यी कुराहरु थाहा पाइराख्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
हामीमध्ये धेरैको स्वभाव हुन्छ, छिटो छिटो गाँस टिप्ने । गाँस टिप्ने मात्र होइन, निल्ने पनि । खानेकुरा मुखमा परेपछि निलिहाल्छौं । त्यसलाई राम्ररी चपाइदैन ।
छिटो खानु वा राम्ररी नचपाइ खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । किन राम्रो होइन ? किनभने यसरी खाँदा मुखमा पर्याप्त पाचन रस निस्कदैन । खानेकुरा टुक्रा-टुक्रा हुँदैन । यसले पाचन यन्त्रलाई बोझिलो बनाउँछ ।
एउटा नयाँ शोध अनुसार छिटो छिटो खाना खानाले मोटोपना बढ्नुका साथै खाएको खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने (मेटाबोलिक) क्षमतामा र्‍हास आउने सम्भावना बढी रहन्छ । शरीरको मेटाबोलिक क्षमतामा र्‍हास आएमा मधुमेह हुने, मोटापना, मुटु रोग लगायतका समस्या उतपन्न हुन गर्छ ।
बिस्तारै चपाएर किन खाने ?
जबकी विस्तारै विस्तारै आरामसित बसेर खाना खानाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहनुका साथै अधिक मात्रामा खाने इच्छा समेत कम भएर जान्छ ।
विस्तारै खानाले खाएको खाना राम्ररी पच्ने हुदाँ शरीरले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्व समेत प्राप्त गर्ने गर्छ ।
यसको ठीक विपरित हतारहतार तथा छिटो छिटो खाना खाँदा शरीरको व्लड सुगरको लेभलमा अचानक तथा लगातार उतारचढाव हुन्छ, जसका कारण इन्सुलिन कम हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
धेरै खानबाट बचिन्छ
विस्तारै विस्तारै भोजन गर्नाले खानाको इच्छा कम भएर जान्छ । साधारणतया मस्तिष्कलाई पेट भरिएको जानकारी दिन कम्तीमा १५ देखि २० मिनेट लाग्ने गर्छ । त्यसैले विस्तारै भोजन गरेको खण्डमा तपाई अतिरिक्त खानाबाट बच्न सक्नु हुन्छ ।
चपाएर खाएको खाना सजिलै पच्छ । जबकी खानालाई नपाइकन सिधै निलेमा त्यस्ता खानेकुरा पच्न समय लाग्छ । साथै खानामा पाइने भिटामिन, मिनरल्स , एमिनो एसिड लगायतका तत्वलाई शरीरले अवशोषित गर्न सक्दैन । यसको ठीक विपरित खानालाई चपाएर खानाले शरीरको मेटाबोलिक क्षमता बढ्ने गर्छ ।
तौल नियन्त्रित हुन्छ
खानेकुरा चपाएर खानाले तथा विस्तारै खानाले अतिरिक्त खानाबाट बच्न सकिन्छ । यसले शरीरमा अतिरिक्त फैट बढ्न दिदैन र तौल नियन्त्रित हुन्छ ।
यदी तपाई छिटोछिटो खाना खानुहुन्छ र खाएको खाना नचपाई खानु हुन्छ भने तपाईलाई छातीपोल्ने वा एसिडिटीकेा समस्या हुनसक्छ । किनकी नपाईकन खाना खानाले पाचनको समस्या उत्पन्न हुन्छ । जबकी त्यही खानेकुरा चपाएर विस्तारै खादा खाएको खाना सजिलै पच्छ र एसिडिटी हुन पाउँदैन ।
Topics #Eating habit
Don't Miss it फ्रिजमा अन्डा राख्ने गर्नु हुन्छ ? यो पढे पछि पक्कै पनि राख्नु हुन्न
Up Next उमालिएको चामलको पानीलाई प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य राम्रो – विधि सहित
यस्ता छन्, कालो ओठलाई गुलाबी ओठ बनाउने घरेलु उपाय
ओठ सुन्दरताको लागि महत्वपुर्ण हुन्छ । यसैले सबैको चाहना ओठलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउँने हुन्छ । जन्मजात सुन्दर ओठहरु हुनेको…